Izindaba - Yini okufanele uyinake lapho uthenga amajazi emvula ezingane?
izingubo zemvula zepulasitiki
izingubo zemvula ze-PE ezilahlwayo
PE imvula poncho
Ijazi lemvula le-PE
izembatho zemvula ze-PVC
I-poncoh yemvula ye-PVC
Ijazi lemvula le-PVC
I-PE poncho ebholeni
izingubo zemvula eziphrintiwe
Yini okufanele uyinake lapho uthenga amajazi emvula ezingane?
Thina bantu abadala sihlale siphatha isambulela lapho sisendleleni. Isambulela asikwazi umthunzi kuphela, kepha futhi sivimbela imvula. Ukuthwala kalula kungenye yezinto ezibalulekile ekuhambeni kwethu, kepha kwesinye isikhathi akulula kangako ukuthi izingane zibambe isambulela. Kuyadingeka ukuthi izingane zigqoke ijazi lemvula lezingane. Kunezinhlobo eziningi zezingubo zemvula zezingane emakethe. Yini okufanele siyinake lapho uthenga amajazi emvula ezingane? Abakhiqizi be-raincoat abalandelayo bazokutshela kafushane ngezinto ezidinga ukunakwa lapho uthenga amajazi emvula ezingane!
1. Indaba yengubo yemvula yezingane
Ngokuvamile, amajazi emvula ezingane enziwe ngezinto ze-PVC, futhi amajazi emvula angcono enziwe nge-PVC nenayiloni. Akunandaba ukuthi yini impahla, sidinga ukuyigcina ngemuva kokuyithenga, ukuze ijazi lemvula lihlale isikhathi eside.
2. Usayizi wejazi lemvula lezingane
Lapho uthenga amajazi emvula ezingane, kufanele sinake usayizi. Abanye abazali bangacabanga ukuthi amajazi emvula ezingane kufanele abe makhulu ukuze azigqoke isikhathi eside. Eqinisweni, amajazi emvula ezingane ezinkulu kakhulu awalungile, futhi azoletha izingane ekuhambeni. Ukuphazamiseka, kungcono ukuthi izingane zizame amajazi emvula lapho zithenga amajazi ukuze zikwazi ukuthenga ijazi lemvula elifaneleka kakhudlwana.
3. Ngabe kukhona iphunga elikhethekile
Iphunga uma kukhona iphunga elikhethekile lapho uthenga amajazi emvula ezingane. Amanye amabhizinisi angenanembeza azosebenzisa izinto ezingafanele ukwenza ama-raincoats ezingane. Amajazi emvula wezingane anjalo azoba nephunga elibi. , Ungathengi uma kunephunga elingajwayelekile.
Isine, ijazi lemvula elinobhaka
Lapho uthenga ijazi lezingane, ijazi lemvula elinendawo yesikhwama sesikole lishiywa ngemuva. Izingane ngokuvamile zidinga ukuphatha isikhwama sesikole. Ngakho-ke, lapho uthenga ijazi lezingane, kufanele uthenge ijazi lemvula elinendawo eningi ngemuva.
Okuhlanu, amajazi emvula ezingane anemibala
Lapho uthengela izingane ama-raincoats, qiniseka ukuthi uthenga amajazi emvula ngemibala egqamile, ukuze abashayeli nabangane abakude bakubone futhi bagweme izingozi zomgwaqo.
Isikhathi Iposi: Dec-08-2020
Rm. 802, Zhongyuan Bldg., No. 368, Youyi N. Str., Shijiazhuang, Hebei, PR China